Ahoana ny fandehanana alika kely | Tontolo alika
Ny iray amin'ireo zavatra tena tian'ny alika dia ny mandeha mitsangatsangana miaraka amin'ilay olona tiany indrindra. Saingy mazava ho azy, ny fandehanana an-tongotra dia tsy hoe miala tsy ao an-trano mandritra ny fotoana fohy fotsiny, fa hetsika iray tena manan-danja tokoa ireo biby ireo dia tsy maintsy atao mba hitazonana ny fifandanjana ara-tsaina marina, ary, eo am-piandohana, endrika ara-batana tsara.
Amin'izay voalaza dia andao hojerentsika ny fomba fandehanana alika kely.
1 Asaivo ampiasaina ao an-trano izy
2 Tonga ny fotoana: ny dia voalohany
Asaivo ampiasaina ao an-trano izy
Ny dia dia zava-baovao be aminy, noho izany tsara raha zatra ao an-trano aloha. Araka izany, ny hataontsika dia asehoy azy ny fehiloha (na vozon'akanjo) sy ny fehikibo, ary apetaho indraindray. Afaka mandeha an-tongotra fohy ao anaty trano isika, ary avelantsika kelikely hiara-hilalao aminy aza. Mazava ho azy, raha hitantsika fa manandrana mikitroka azy io toy ny hoe manandrana mamaky azy dia hiteny mafy hoe "TSIA" isika, nefa tsy hiantsoantso, ary rehefa mijanona izy dia hanome azy alika ho an'ny alika.
Mandritra ny diabe, ary mba tsy ho zatra misintona ny tadiny, dia mamporisika anao aho mandeha manome mamy azy ianao ka amin'ny farany, dia hitandrina anao tokoa izy ka hanadino ny ambiny, ary tsy hanary anao.
Tonga ny fotoana: ny dia voalohany
Tonga ihany ilay andro nandrasana hatry ny ela. Izahay dia hitafy ny fehin-kibo (na ny vozon'akanjo) ary ny fehy, hampipetraka anao alohan'ny hanokafana ny varavarana izahay, hanome anao hitsaboana anao izahay ary hivoaka. Ity dia zavatra tokony hatao lasa mahazatra, satria izy io no hamaritra, amin'ny lafiny lehibe, ny fihetsiky ny alika mandritra ny diany. Raha avelantsika hanomboka azy izy dia afaka zatra misintona ny tadiny. Ho fanampin'izay, soso-kevitra hatrany fa samy mankafy an-tongotra ny olona sy ny alika.
Etsy ivelany dia misy zavatra maro izay hisarika ny sain'ny namanao, fa amin'ny fitsaboana eny an-tanana dia tsy mila miahiahy na inona na inona ianao. Mijanona isaky ny mahatsapa somary tery ny fehy. Tsy ho ela dia hitodika ny volonao, miresaka aminao. Raha vantany vao eo imasonao io dia omeo loka. Mety tsy maintsy ataonao imbetsaka izany, fa izany dia hanampy anao hanafoana ny fihetsika.
Ary ahoana raha mahita alika hafa mandeha ianao? Avelao izy hanakaiky kokoa, fa raha mbola hitanao fa milamina ny hafa (izany hoe tsy mimenomenona izy ireo, manana sofina amin'ny toerana mahazatra, tsy mampiseho ny nifiny ary tsy manana volo volo). Zava-dehibe ny fifandraisanao amin'ny olon-tianaoRaha tsy izany dia mety hiafara amin'ny olana ara-pitondrantena ianao.
Rehefa lasa ny 10-15 minitra taorian'ny nialanao tao an-trano dia tokony hiverina ianao izao. Ny alikakely reraka haingana, fa ho hitanao kosa fa rehefa mihalehibe izy dia afaka mandany fotoana bebe kokoa miaraka aminy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Puppies » Ahoana ny fandehanana alika kely
Ny alika antitra indrindra eran-tany dia maty tamin'ny faha-30 taonany
Ny alikako dia manintona ny vodiny amin'ny tany, maninona?